Tranonkala ho an'ny reny mitaiza sy ny zaza
Fianakaviana sy tokantrano
Sakafo zazakely isam-bolana
Manome sakafo ny reny mitaiza
Ny sakafo ho an'ny zaza eo amin'ny
Ny fahasalaman'i Neny
Mamaclub.info- Ampy tsara ho an'ireo mamanay sambatra, be fitiavana sy be fitiavana izany. Izahay dia tsy hanana fanontaniana raha tsy misy valiny marina.
Raha vao manomana fotsiny ny hanome ny tenanao sy izao tontolo izao ho fiainam-baovao sy nofinofy ho an'ny zaza ianao, dia hanampy anao amin'ny torohevitra momba ny fitondrana vohoka ny toro-hevitrao ary ho mpanampy mahatoky ny fahaterahana.
Hilaza aminareo momba ny endri-javatra sy ny karazan-tsakafo ny zaza, ny tokony hatao, ny fomba amam-pihetseham-po ary ny fomba hahalalanao ny zanakao tianao indrindra. Ahoana no hiarovana azy amin'ny aretina na ny fomba hamahana azy ireo haingana araka izay azo atao.
Zarao ny tsiambaratelon'ny fangorahana, satria ny renim-pianakaviana dia mijery sy mahatsapa hatrany.
Hanana fitiavana sy am-pitiavana eo anivon'ny fianakavianareo izahay, hampianatra anao ny fomba hampifaliana ny fianakaviana, ny asa ary ny fialam-boly tiany indrindra.
Mankanesa aty aminay ary dia hampifaly anao amin'ny toro-hevitra, fiarahamonina ary lahatsoratra mahaliana!
Copyright © 2019 MamaClub | Powered by Astra
Mampiasa cookies ity tranonkala ity. Azonao atao ny manova ny safidy cookies ao amin'ny navigateur.ca. More
ilaina Always Enabled